Maitiro Eko Kugadzira A Banner YeYouTube? ▷ ➡️ Vateveri ▷ ➡️
Dai 12, 2021 0 mashoko 490
Kudzidza kugadzirisa yako YouTube chiteshi kwakanyanya kukosha kana tichida kukura mukati meiyi yakakurumbira vhidhiyo chikuva. Kana iwe uri kufunga kuzvipira iwe zvachose kune zvemukati zvisikwa saka zvakafanira kutanga nekuve neyakagadzirwa gwara rakarongeka nenzira.
Muchinyorwa chedu pa Nhasi tichaenda kukuratidzira matipi anoshanda anozokubatsira iwe kugadzira bhanera rakanakira yako YouTube chiteshi. Parizvino pane maturusi akasiyana anogona kukubatsira kugadzira yakanakisa mireza, uye pano tichataura zvimwe zvacho.
Chii chinonzi mureza?
Ichi ndicho chimwe chezvinhu zvikuru zvatinofanira kuziva usati wadzidza maitiro ekugadzira banner yeYouTube. Kana tichitaura nezveshoko rekuti "mureza" tiri kureva mhando yemufananidzo wakakurumbira unoshanda kuzivisa imwe nzira.
Iyo mureza inozivikanwa, pakati pezvimwe zvinhu, nekukura kwayo kunoshamisa. Uku ndiko kumwe kwekusiyana kukuru kana uchienzaniswa neprofile foto kana logo izvo zvinowanzo kuve zvidiki uye zvakanyatsojeka. Mureza uri kumusoro kwenzvimbo yedu.
Bhanhire rakagadzirwa zvakanaka inogona kuve hoko yakakwana kubata vatsva vatsva kuchiteshi chedu. Ndosaka zvakakosha kuti udzidze kugadzira yepakutanga, inobata maziso uye inonakidza mune yeruzhinji ziso. Nenzira iyi isu tichawana chinzvimbo chiri nani chechiratidzo chedu.
Isu tese tinogona kuva neyedu bhana
Kune avo vanofunga kuti kugadzira chikwangwani ibasa chete kune zvigadzirwa zvebhizinesiNekudaro, isu tese tinogona kuwana imwe. Vanhu vanogona zvakare kuve neyakavanzika zita uye isu tinofanirwa kuisa nguva mairi kuti tibudirire kukura mune yepakati nepakati yakareba.
Kana iwe uine wega chiteshi mukati meYouTube, zvakakosha kuti utange kuisa yega ye zvikamu inoratidza chiratidzo chako, semuenzaniso:
Uye zvechokwadi, mureza
Nzira yekugadzira yakanakisa bhana
Paunenge uchigadzira yakanakisa mendenenzi yeYouTube, zvinodikanwa kuti utore pfungwa dzinoverengeka dzakakosha, kusanganisira yedu yekufungidzira uye kugona.. Ngatirege kukanganwa kuti kugadzira banner inyaya yekugadzira, saka kugona kwakakosha.
Izvo zvakare zvakakosha kusarudza yakanaka dhizaini chirongwa kana kunyorera. Neraki pawebhu tinowana dzimwe nzira dzakawanda, dzimwe dzadzo dzakasununguka zvachose. Edza ku Sarudza Anwendung iyo inokupa iwe akagadzirira-akagadzirwa matemplate, kwaunongofanira kugadzirisa zvidiki diki.
Zvakakosha chengetedza saizi yema banner edu yeYouTube. Rangarira kuti zvinoenderana nechero chishandiso chainokuona iwe ndiyo mabhenji ako anotaridzika sei. Ikiyi zvakare kiyi yekuziva mashandisiro erudzi rwevara, font uye saizi yemifananidzo iwe yauchazopinza mubhana rako.
Unogona here kuisa zvimwe mazwi anotsanangura chiteshi chako. Saka vanhu vanozove nepfupiso yekutarisa misoro yaunogadzira mune yako zvemukati uye vanogona kunyorera kana vachinzwa kukwezva.
Matanho ekuisa banner kuYouTube
Ita click nezve yako mufananidzo mufananidzo
Dzvanya pa "Chiteshi chako"
Nzvimbo iyo dhizaini chikamu uye tumira chikwangwani chawakagadzirira chiteshi chako.
1 Chii chinonzi mureza?
2 Nzira yekugadzira yakanakisa bhana
3 Matanho ekuisa banner kuYouTube
Maitiro ekurodha pasi vhidhiyo yeYouTube yePowerPoint?